Niharan’ny Fandrahonana Ny Mpanohitra Alzeriana Taorian’ny Fifidianana Filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Avrily 2014 16:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, English, Italiano, Deutsch, Français
Mpikambana ao amin'ny hetsika Barakat manao fihetsiketsehana nandritra ny fifidianana tao Alzeria. Sary avy amin'ny Algerie Focus. CC-license-NC-2.0
[Mankany amin'ny teny Frantsay avokoa ny rohy rehetra raha tsy misy fanamarihana hafa.]
Mety hampidi-doza ny fidirana ho mpanohitra ao Alzeria. Fandrahonana ho faty, fanaratsiana amin'ny haino aman-jery, fampitahorana, famoretan'ny polisy, fanitsakitsahana ny fiainana manokana sy ny teritery ara-politika no mihatra amin'ny fiainanao.
Nanomboka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 17 Aprily 204, nanamafy hatrany ny famoretany amin'ireo mpanohitra ny fitondrana ary mandrahona ireo izay mitsipaka ny fe-potoa-piasana faha-efatry ny filoha Alzeriana Abdelaziz Bouteflika, 77 taona izay manana olana ara-pahasalamana. Nahatonga an'i Bouteflika, izay efa nitondra ny firenena nanomboka tamin'ny taona 1999, hirotsaka hofidiana indray ny fanovana lalàmpanorenana tao amin'ny firenena.
Nandritra ny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana, izay nanomboka tamin'ny 23 Marsa 2014, niharan'ny fanalam-baraka sy ny herisetran'ny polisy ireo mpanao fihetsiketsehazna sy mpikatroka aterineto miaro ny fifidianana demaokratika. Tsy nitsahatra ny fandrahonana taorian'ny nahalany an'ny filoha Bouteflika tamin'ny fomba manetriketrika, izay voalaza fa feno hosoka [fr].
Anisan'ireo kendrena voalohany ny hetsika Barakat (Ampy izay), iray amin'ireo fihetsiketseham-panoherana lehibe indrindra ao Alzeria. Noravan'ny polisy tamin-kerisetra izany fihetsiketsehana izany, ka maro tamin'ireo mpikambana sasany no fantatra fa voadaroka sy nosamborina tsy amin'ny antony. Mikendry ireo lohandohan'ny mpisorona amin'ny fihetsiketsehana ny fitondrana Alzeriana sy ny haino aman-jeriny amin'ny famoahana ny mombamomba azy ireo manokana imasom-bahoaka.
Lilia Oufellia, mibilaogy ao amin'ny TS Alzeria, nanoratra momba ny hetsika fanalam-baraka atao amin'ireo mpikambana ao amin'ny hetsika Barakat:
Nisy ny pejy Facebook natsangana mba handresena lahatra ireo mpampiasa Facebook tsy hanatevin-daharana ireo mpanohitra sy ireo miantso hidina an-dalambe mba hanohitra ny fe-potoa-piasana faha-efatry ny filoha, indrindra amin'ny hetsika Barakat. Noharatsiana sy nalàna baraka tanteraka ny hetsika. Ao amin'ny pejy iray ohatra, naparitaka ny sary misy ireo renivohitra voakasiky ny Lohataona Arabo. Mandrisika ireo mpikambana ao amin'ilay pejy ny vondrona mba haka fitandremana manoloana ireo “fahavalon'i Alzeria”.
Namoaka fanentanana manohitra ny fihetsiketsehana ny fahitalavitra Ennahar sy ny Numidia News fahitalavitra roa nisokatra vao haingana ary fantatra amin'ny fanohanany mivantana ny fitondrana. Tamin'ny vaovao iray notaterin'ny Numidie News, izay mpandraharaha akaikin'ny filoha no tompony, nampangaina ho mpamadika sy nosokajiana ho fahavalon'i Alzeria ireo mpomba ny hetsika, nopetahana anarana ho toy ny mpampihorohoro “mampidi-doza” mihitsy aza.
Nopetahan'ny tati-baovao ho mpitsikilon'ny firenena tandrefana ny hetsika, izay matetika ambaran'i Bouteflika ho “tanam-bahiny”.
Nanangana pejy Facebook sy vondrona am-polony ny manampahefana Alzeriana, izay amoahan'izy ireo ny mombamomba manokana, sary sy fifandraisana amin'ireo mpikambana ao amin'ny mpanohitra. Anisan'izany pejy izany ny Barakat Fisolokiana, Fanoherana Antserasera Alzeriana, sy ny Ligy Nasionaly Fiarovana an'i Alzeria. Nanazava ny fomba fasovohan'ny sampam-pitsikilovana amin'ny tambajotra sosialy antserasera ilay mpanao gazety Alzeriana Siwel:
Nahazo fitaovana raitra marobe hanatontosany ny asany amin'ny famoretana ny Sampam-pitsikilovana Ankapobeny (RG) sy ny Departemantam-pitsikilovana sy ny Fiarovana (DRS) ao Kabylia. Tsy misy zavatra tongatonga ho azy. Araha-maso akaiky ny asa aman-draharaha sy ny fiainana manokan'ireo mpandala ny demaokrasia.
Nisy ny antso ho amin'ny famonoana navoaka sy nozaraina tao amin'ireo pejy Facebook ireo, tahaka ity pikan-tsary eto ambany ity:
Pikan-tsary tao amin'ny pejy Facebook “Barakat Fisolokiana”. Hoy ny vakiny fanehoan-kevitra iray: ” tsy maintsy vonoina izy satria fahavalom-pirenena.”
Mampatsiahy ny zavatra natao nandritra ny ady an-trano tamin'ny taona 1990 ity paikady ity izay nandrava an'i Alzeria nandritra ny taom-polo mahery. Novonoina ireo mpanohitra sy manam-pahaizana tamin'izany fotoana izany taorian'ny fandefasana ny mombamomba azy ireo ho hitam-bahoaka. Tahaka izany ny tranga nahazo an'i Sidali Ben Mechiche, mpanao gazety maty nisy namono tamin'ny 10 Oktobra 1988, sy Djamel-Eddine Fahassi, maty nisy namono tamin'ny 8 Marsa 1995.
Niteraka tahotra sy fahatezerana teo amin'ny mpanohitra izany fandrahonana izany. Nanapa-kevitra hametraka fitoriana eny anivon'ny fitsarana ny sasany tahaka ilay mpanao gazety Idir Tazerout,, na dia tsy azo antoka aza ny fahaleovantenan'ny fitsarana ao amin'ny firenena. Ny sasany kosa nisafidy ny hangina mandritra ny fotoana fohy ho fiarovana ny fianakaviany. Ary misy koa ireo mijoro ho amin'ny Alzeria afaka sy demaokratika.